အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ဂိမ်းတွေကိုမှ ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Gameloft Games Club မှာရှိတဲ့ Action , Racing , Casual , Shooting စတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစား အစုံအလင်ကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းထားပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို အခုပဲရယူလိုက်ပါ။
၇ရက် အခမဲ့ (ပထမဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်)
တစ်ရက် ၂၀၀ ကျပ်
Gameloft Games Club နှင့်ပတ်သက်၍ မေးလေ့ မေးထရှိသည့် မေးခွန်းများ
၁။ “Gameloft Games Club” ဆိုတာ ဘာလဲ။
“Gameloft Games Club” ဆိုသည်မှာ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ဂိမ်းတွေ ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ Portal တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုPortal မှတစ်ဆင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းများကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ကစားလို့ရမယ့် ဂိမ်းတွေရှိရာ ဆိုက်တစ်ခုပါ။
၂။ MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Gameloft Games Club ထဲ မည်သို့စတင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရူ ရမလဲ။
MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Gameloft Games Club ထဲကို http://wapshop.gameloft.com/mpt/ မှတစ်ဆင့် စတင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၃။ Gameloft Games Club Service ကို ဘယ်လိုစတင်အသုံးပြုလို့ရမလဲ။ ၀န်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
MPT ဖုန်းသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Gameloft Portal Service များကို စတင်အသုံးပြုလိုပါက
(၁) ဖုန်း၏ web browser မှ တစ်ဆင့် http://wapshop.gameloft.com/mpt/ တစ်ဆင့် စတင်ဝင်ရောက်ပါ။
(၂) စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ စာမျက်နှာပေါ်လာပါက သေချာစွာ ဖတ်ပြီး “Ok” ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
(၃) ထို့နောက် Gameloft ၏ ပင်မ စာမျက်နှာ သို့ရောက်ရှိသွားပြီး “Join Now” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(၄) ပထမဦးဆုံး စတင်သုံးစွဲသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ၇ ရက် အခမဲ့ တိတိ အသုံးပြုခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ကာလပြီးဆုံးပါက တစ်ရက်လျှင် ၀န်ဆောင်ခ ၂၀၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး Gameloft Games Club Service မှ ရာနှင့်ချီသော အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းများအား အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ရယူကစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၅) စာတိုအမှတ် ၈၇၉၃ သို့ON ဟုပေးပို့ ပြီး ၀န်ဆောင်မှုအားရယူနိုင်သည်။
၄။ ”စမ်းကြည့်၊ ပြီးမှဝယ်” (Try & Buy) ဆိုတာ ဘာလဲ။
တစ်ချို့ဟန်းဆက်တွေမှာတစ်ချို့ဂိမ်းတွေကိုစမ်းကစားကြည့်လို့ရမယ်။ ဒီဂိမ်းကိုကြိုက်လို့ ဒီထက်ပိုပြီး စုံစုံလင်လင်ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗားရှင်းအပြည့်ကို ဝယ်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ်။
၅။ “ဂိမ်းမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ရန်” (In App Purchase) ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဂိမ်းမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်သုံးလျှင် သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုပြီးကစားလို့ကောင်းတဲ့အခြားအထူးအခွင့်အရေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ MPT သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ဖုန်းဘေလ်မှတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၆။ Gameloft ဂိမ်းတွေကို ဘယ်ဖုန်းနဲ့ကစားလို့ရလဲ။
Andriodဖုန်း သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိဖုန်းမှာကစားလို့ရတဲ့ဂိမ်းတွေပဲ မြင်ရမှာပါ။ Gameloft Portal ရဲ့ ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာမှာ မိမိဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဂိမ်းတွေကိုပဲ သီးသန့်စီစဉ်ထားတာပါ။
၇။ iOS မှာကော ကစားလို့ရလား။
၈။ Android မဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာကော ကစားလို့ရလား။
ဖုန်းအတော်များများမှာ Java ဂိမ်းတွေကို ကစားနိုင်မှာပါ။
၉။ Gameloft Games Club ၀န်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Gameloft Games Club ၀န်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုပါက http://wapshop.gameloft.com/mpt/ ကို သွားပါ။ စာမျက်နှာ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ “Gameloft Club” ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် “Leave the Gameloft Club” ကို နှိပ်ပြီး “Terminate Subscription” ဆိုတာကို ဆက်နှိပ်၍ Gameloft Club အသင်းကနေထွက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်ရင် 8793 ကို “STOP GAME” လို့ပို့ပြီးလည်း Gameloft Club အသင်းကနေထွက်လို့ ရပါတယ်။
၁၀။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းတွေကို သက်တမ်းသတ်မှတ်ထားတာမျိုး ရှိလား။
MPT သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများအတွက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို ၀န်ဆောင်မှုရယူထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်းသာ အသုံးပြုလို့ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုက်ပါက ဒေါင်းလုတ် ရယူထားသော ဂိမ်းများအား ဆက်လက် ကစားခွင့် ရရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ။
၁၁။ ဂိမ်းကို မှားဖျက်မိသွားတယ်၊ ဘယ်လိုပြန်ယူလို့ရမလဲ။
၀န်ဆောင်မှုရယူထားသည့် ကာလအတွင်းမည်သည့်ဂိမ်းကို မဆို “Gameloft Games Portal” မှ ပြန်လည် ဒေါင်းလုတ် ဆွဲပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
Gameloft Games FAQs
1. What is “Gameloft Games Club” Service?
“Gameloft Games Club” is offering High Quality Standard games and hundreds of gaming portal where customers can go download and play the games that they enjoy.
2. How do MPT customer visit the Gameloft Portal?
MPT’s customer can enjoy Gameloft Games Club via http://wapshop.gameloft.com/mpt/
3. How do you use Gameloft Games Club Service? How many charges for this service?
When MPT customers would like to use Gameloft Games Club Service;
(1) Please enter http://wapshop.gameloft.com/mpt/ via phone’s web browser.
(2) Terms & Conditions page will appear. After carefully reading this page, click “Ok” button.
(3) And then customer will see Gameloft Home Page and click “Join Now” button.
(4) For the first time customer will get7days free for this service. After7days free period, we will be charged 200 Ks/day as service fees from subscriber and they can enjoy hundreds of high quality standard games with unlimited access from Gameloft Games Club Service.
4. What is “Try & Buy”?
Gameloft has pre-installed some of its game onto some device and customers can try these games for free. If customer like these games and want to play with more features, they will be able to purchase the full version.
5. What is “In app Purchase”?
There are some in-game items that customers will be able to purchase for special benefits within the game. MPT customers will be able to purchase it using their phone bill.
6. Which phone can support the Gameloft game?
Customers who use android devices will be able to see only the games that they will be able to play on their phones. The home screen of the Gameloft portal will be customized to each device’s compatibility with the games.
7။ Can I play this service on iOS?
8။ Can I play the game on non–android phone?
Java game can be played with most devices.
9. How do I unsubscribe from Gameloft Games Club?
For unsubscribe, please go to Gameloft Games Club portal link http://wapshop.gameloft.com/mpt/. And then click “Gameloft Club” at the left bottom of page. After that, click “Leave the Gameloft Club” and then click “Terminate Subscription”.
Customers can also unsubscribe Gameloft Games Club by sending SMS “STOP GAME” to 8793.
10. What is the expiry date of the downloaded games?
MPT customers can play downloaded game during the subscription period. And the downloaded games can’t play after unsubscribing the service.
11. I accidentally deletedagame. How can I get it again?
During the subscription period, MPT customers can download every games again & again from Gameloft Games Club.
သင်သည် ပြင်ပ Portal တစ်ခုမှ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သင့် MSISDN ကို ရယူခွင့်ပေးနေပါသည်။ ဤ Portal မှ သင် ဝယ်ယူသည့်အခါတွင် ၎င်းဖုန်းမှ ကျသင့်ငွေကို နုတ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုပေးသော ကုမ္ပဏီမှ အသုံးပြုသူများ၏ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို တခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
ဂိမ်းတစ်ခုအား ဝယ်ယူပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရာတွင် မအောင်မြင်ပါက အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ။
ဂိမ်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက် သင့်ဖုန်း၏လက်ကျန်ငွေ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။
သင့်ဖုန်းအတွင်း Memory နေရာလွတ် လုံလုံလောက်လောက် ရှိပါသည်။
သင့်ဖုန်းအတွင်း အက်ပလီကေးရှင်းများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် သင် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
သင့်ဝယ်ယူထားသော ဂိမ်းများအား မတော်တဆဖျက်မိခဲ့ပါက ၎င်း ဂိမ်းအား ၀ယ်ယူခဲ့သော ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ ပြန်လည်ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါသည်။ “ My Download Section “ တွင် ပြန်လည် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
သင့်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) အဆင်မပြေမှုများအား MPT ၏ သုံးစွဲသူကူညီပေးရေးဌာန (customer service) ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်းနှင့် တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်မှုများအကြောင်း မေးခွန်းများ ရှိပါက (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့ ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.Gameloft.com တွက် ဝင်ရောက်ကြည့်။
သင့်ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီ ရယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူ ကူညီပေးရေးဌာန (Customer Care department) support@Gameloft.com သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်ပါ။
• သင်သည် ပြင်ပ Portal တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သင့် MSISDN ကို ရယူခွင့်ပေးနေပါသည်။ ၇ ရက် အခမဲ့ Gameloft Portal မှ ဂိမ်းများကို ၀င်ရောက်ကစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခမဲ့ကာလပြီးသွားမှသာ ၀န်ဆောင်ခကိုကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
• Gameloft ကုမ္ပဏီမှ အသုံးပြုသူများ၏ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို တခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ အသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
• ဂိမ်းတစ်ခုအား ဝယ်ယူပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရာတွင် မအောင်မြင်ပါက အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ။
၁။ ဂိမ်းအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက် သင့်ဖုန်း၏လက်ကျန်ငွေ လုံလောက်မှု ရှိပါသည်။
၂။ သင့်ဖုန်းအတွင်း Memory နေရာလွတ် လုံလုံလောက်လောက် ရှိပါသည်။
၃။ သင့်ဖုန်းအတွင်း အက်ပလီကေးရှင်းများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် သင် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
၄။ သင့်ဝယ်ယူထားသော ဂိမ်းများအား မတော်တဆဖျက်မိခဲ့ပါက ၎င်း ဂိမ်းအား ၀န်ဆောင်မှုရယူထားသည့် ကာလအတွင်း အချိန်မရွေး ပြန်လည်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
၅။ Gameloft ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများ (သို့မဟုတ်) အဆင်မပြေမှုများအား MPT ၏ Customer Care 106 ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၆။ ဖုန်းနှင့် တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်မှုများအကြောင်း မေးခွန်းများ ရှိပါက (သို့မဟုတ်) Gameloft မှဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.Gameloft.com တွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။
၇။ Gameloft မှဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီရယူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူ ကူညီပေးရေးဌာန (Customer Care department) support@Gameloft.com သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါ